China API610 OH2 Pump CMD Model vagadziri uye vanotengesa | damei kingmech pombi
Type CMD pombi iri yepakati-yakaiswa imwechete nhanho overhung magumo ekudhonza pombi yakagadzirirwa maererano neAPI 610.
Kukura: 1-16 inches
Unyanzvi: 0-2600 m3 / h
Kupisa: -80-450 ° C
Chinyorwa: Simbi yesimbi, SS304, SS316, SS316Ti, SS316L, CD4MCu, Titanium, Titanium Alloy, Hastelloy Alloy
Zvekupomba zvakachena, zvishoma zvakashatiswa, kutonhora, kupisa, kemikari kwazvakarerekera kana zvechisimba midhiya.
• Mune zvekuchenesa, petrochemical indasitiri, kugadzira marasha uye yakadzika tembiricha mainjiniya.
• Mune indasitiri yemakemikari, indasitiri yemapepa, indasitiri yemaspuru, indasitiri yeshuga uye maindasitiri akawandisa ekugadzirisa.
• Muindasitiri yemvura, zvirimwa zvemvura yegungwa.
• Mukupisa uye mhepo-kutonhodza.
• Magetsi emagetsi.
• Mukuchengetedzwa kwezvakatipoteredza mainjiniya.
• Mumaindasitiri engarava uye ekumahombekombe.
Chikamu chimwe chete, chakatwasuka, chakakomberedzwa chakakamurwa volute casing pombi nemakumbo pane epakati uye imwe yekupinda radial impeller,, axially suction, radial kubuda. Zvichienderana nemamiriro ekushanda hydraulic balance maburi. Casing chifukidziro nekutonhora kana kudziyisa kubatana, shaft yekuisa chisimbiso nemapakeji kana mechiki zvisimbiso zvechero dhizaini (kuroora kana kaviri kushanda), kubatana kwekutonhora, kufashaira kana kuvhara mvura. Yakagadziriswa pipework zvinoenderana nezvirongwa zveAPI.
Kutonhora kwechigadziko cheplate chinogoneka. Flanges inogoneka maererano neDIN kana ANSI. Izvo zvakafanana zita rekumanikidza kwekukweva uye kuburitsa mafuru.
Kunongedzera kwekutenderera kutenderera nenzira inoonekwa kubva kumagumo anotyairwa.
1.Sulphric acid, nitric acid, hydrochloric acid, phosphoric acid ye organic organic uye inorganic acid iyo panguva dzakasiyana tembiricha uye mamiriro.
2.Sodium Hydroxide, sodium carbonate uye alkaline mvura panguva dzakasiyana tembiricha uye wevasungwa.
3.All mhando munyu mhinduro.
4.Various liquid petro makemikari zvigadzirwa, organic makemikari pamwe nembishi zvinhu zvine ngura zvine hunhu uye zvigadzirwa.
Parizvino, zvinhu zvinorwisa-kukanganisa zvemapombi zvakapihwa nemuti wedu zvinogona kuzadzisa zvese zvinodiwa zveiyo svikiro yataurwa pamusoro.
Ndokumbira upe iwo mamiriro etsananguro ebasa repombi kwatiri, kana iwe uchiraira.
1.Design uye yekugadzirisa standard kutevedzera maitiro maitiro indasitiri kunoitwa. Kukurumidza kubvisa kana gungano. Kubvarura pasina kubviswa kwepombi basa uye mutyairi.
2.Only 7 anotakura mafuremu e48 saizi. Iwo iwo ma hydraulics (impellers) uye anotakura mafuremu senge echiedza kana epakati basa akateedzana CHZ
3.Low bazi velocity, yakaderera ruzha nhanho. Nekuda kwemamwe ekutanga matanho epamberi, hwakareba hupenyu hweyakagadziriswa.
4.Casing joini haigoni kutyora. Optimum kutevedza akasiyana siyana mashandiro ezvinhu, yakavharwa impeller ine yakanyanya kushanda, yakaderera NPSHR
5.Optimum kutevedzera akasiyana siyana mashandiro ezvinhu, yakavharwa impeller ine yakanyanya kushanda, yakaderera NPSHR.
6.Kana casing uye impeller yekupfeka zvindori uye shaft chisimbiso zviri pasi pekupfeka, casing, impeller uye shaft inogona kushandiswazve .Kudiki kupfeka kwekasi uye impeller kupfeka mhete nekuda kwekushaikwa kwezvakasimba.
7.Stable, aligning shaft position, robust shaft with small shaft deflection, few components .Vashoma vane macheki anodiwa .Hapana kutonhora mvura pombi
1.High kuvimbika uye mukusiyana .Short yakavharwa-pasi .Kuderera kwekugadzirisa mutengo
2.Zvishoma zvikamu, hupfumi hweparutivi chikamu chekuchengetedza, yakaderera stock kuchengetedza mutengo.
3.Long yakatemwa hupenyu hwe antifriction mabheyari, yakareba yakatarwa hupenyu hwe shaft zvisimbiso, ipfupi nguva yekuvhara- pasi, yakaderera kuchengetedza inodhura yakanyanya kushanda, yakaderera kushanda
4.Mitengo yakaderera yebasa rebasa repombi uye kudzivirirwa kwezwi, yakaderera chikamu chikamu uye mutengo wekugadzirisa, kuvimbika kwakanyanya.
5.High kuvimbika kwepombi, yakaderera nguva yekuchengetedza, yakaderera magetsi mutengo nekuda kwekuchenjera kwepombi kusarudzwa. Mari diki yekudyara yezvirimwa.
6. Kuchengetedza kwakadzama kwekugadzirisa uye kusara kwechikamu chekuchengetedza matura, nguva pfupi yekugadzirisa.
7.Long yavose sezvavakatarirwa upenyu kurongedza kana mechanicals zvisimbiso. Ipfupi kuvhara. Nyore kugadzirisa, yakaderera mashandiro emari. Hapana mari yekudyara yekutonhora system.
Pashure: API610 OH1 Pump FMD Muenzaniso
Zvadaro: API610 OH3 Pump GDS Muenzaniso
API610 OH4 Pump RCD Muenzaniso
API610VS6 Pump TDY Muenzaniso